किसानको प्रश्न–‘गोठ बनाउन पनि स्टिमेट ?’ • Pokhara News by Ganthan
प्रकाशित जुलाई 16, 2019
पोखरा, ३१ असार / पोखरामा रहेको आदर्श गाई फार्मका सञ्चालक रामप्रसाद पौडेलले सरकारी अनुदान पाएका छन् । तर झण्झटिलो प्रावधानका कारण उनलाई धेरै दुख छ । सरकारले अनुदान दिँदा गोठ र खोरको पनि स्टिमेट मागेपछि त्यस्तो अनुदानबाट किसानले लाभ पाउन नसक्ने उनी बताउँछन् ।
गाईगोठ र बाख्रा फाराम बनाउनका लागि इञ्जिनियरको स्टिमेट माग्नु नै गलत भएको उनको भनाई छ । ‘किसानले २ लाख अनुदान पाएको छ । स्टिमेट गर्दा २० हजार इञ्जिनियरलाई दिनुपर्छ । एउटै इञ्जिनियरलाई भेट्न दशौं पटक जानुपर्छ,’ उनले भने, ‘एउटा गोठ बनाउनका लागि पनि कुनै स्टिमेट चाहिन्छ ? किसानले ५ बर्षको एग्रिमेण्ट गरेर गोठ बनाउँछ ।
ईन्जिनियरले ५० बर्षको स्टिमेट बनाईदिन्छ । त्यो के काम ?’ आँफूसँग प्राविधिक नभएपछि भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्रले बाहिरबाटै भएपनि स्टिमेट ल्याउन आग्रह गर्छ । तर यसले किसानलाई निकै मर्का परेको छ ।
अर्का किसान दुर्गाबहादुर गुरुङ इञ्जिनियरले बनाउने स्टिमेट निकै महंगो भएको गुनासो गर्छन् । ‘अनुदान लिने पैसाले पनि स्टिमेट बनाउन पुग्दैन । सरकारले अनुदान के का लागि दिने हो ?,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले प्रयोग गरेका स्थानीय श्रोत साधनको मूल्यांकन हुँदैन । प्राविधिकलाई गाडीमा बोक्दैमा ५० हजार खर्च हुन्छ । अनि किसानलाई त्यस्तो अनुदानले के फाईदा हुन्छ ?’ उनले उत्पादनका आधारमा अनुदान दिन नसके किसानलाई सस्तो ब्याजदरमा ऋण लिने वातावरण बनाईदिन सुझाएका छन् ।
‘नक्कली किसानहरु अनुदान लिनका लागि गाईभैंसी पाल्छन् । अनुदान पाएको भोलिपल्ट गाई भैंसी गोठमा हुँदैन । यस्तालाई कारबाही हुन्छ कि हुँदैन ? यसले इमान्दार किसानको बदनामी भो,’ उनी भन्छन्, ‘२० लाख दिने भनेर सरकारले योजना माग्छ । तर २ लाख मात्रै दिन्छ । किसानलाई नझुक्याईयोस् ।’ उत्पादनका आधारमा अनुदान दिनुपर्ने अधिकांश किसानको माग थियो ।
भैंसीपालक अर्का किसान मोहन कार्की दुधको उचित मूल्य नहुँदा किसानको लगानी उठ्न नसकेको बताउँछन् । ‘पशु विकास फारामले १० बर्षदेखि एउटै मूल्यमा दुध बेचेको छ । हामी पनि त्यही मूल्यमा बेच्न सक्दैनौं । दुधको मूल्य निर्धारण गर्ने निकाय को हो ?,’ उनी भन्छन्, ‘दुधको परीक्षण गरियोस् । उचित मूल्य निर्धारण गरियोस् ।
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रकी प्रमुख डा. शोभा शर्माले मन्त्रालय र निर्देशनालयको समन्वयमा किसानलाई परेका असहजता र बाधा अप्ठेरा फुकाउन आँफूहरु तत्पर रहेको बताईन् । आगामी बर्षदेखि विज्ञ केन्द्रले प्राविधिक सेवा मात्रै दिने भन्दै उनले यस्तो समस्या नदोहोरिने प्रतिबद्धता जनाईन् । कार्यालयका पशु चिकित्सक ठगेन्द्रप्रसाद अर्यालले किसानका सबै प्रश्न र गुनासो जायज भएको भन्दै कम गुनासो आउने गरी कार्यक्रम गरिने बताए ।
पोखरा महानगर अन्तर्गत पशु विकास महाशाखा प्रमुख शिव वाग्लेले महानगरले गरेका काम’bout जानकारी गराए । महानगर ब्यवस्थित बधशाला निर्माणमा जुटेको भन्दै छनौट भएको जग्गामा सामान्य विवाद भएकोले केही समय रोकिएको उनको भनाई छ । आगामी बर्ष यसलाई ब्यवस्थित गरेर लैजाने वाग्लेले बताए । पत्रकार प्रकाश ढकालले सहजीकरण गरेको कार्यक्रममा किसानहरुले पहुँच र पावरका भरमा भन्दा बास्तविकतालाई हेरेर सेवा दिन कार्यालयसँग आग्रह गरे ।